Puntland oo soo dhaweysay ku dhawaad 758 qof oo Somaliland ay kasoo masaafurisay Laascaano - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo soo dhaweysay ku dhawaad 758 qof oo Somaliland ay kasoo masaafurisay Laascaano
October 3, 2021 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Gaari sida dadka Laascaano laga soo masaafuriyay.[Isha Sawirka: Facebook]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa soo dhaweysay ku dhawaad 758 qof oo Somaliland ay kasoo masaafurisay magaalada Laascaano, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha Puntland.
“Dowladda Puntland ee Soomaaliyeed waxay bannaanka magaalada Gaalkacyo ku soo dhaweysay dad Soomaaliyeed oo gaaraya 758, dadkaan oo isugu jira haween, caruur iyo rag intaba ayaa 2 October 2021 waxaa maamulka Somaliland ka soo saareen Laascaanood.” Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa sidaas ku yiri boggiisa Twitter-ka.
Maamulka Somaliland ayaa Sabtidii si khasab ah magaalada Laascaano uga masaafurisay muwaadiniin Soomaaliyeed oo badankood ka ay ka soo jeedaan koonfurta Soomaaliya.
Madaxweynaha Puntland oo Cawil Mataan u magacaabay guddoomiyaha gobolka Nugaal
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Isniin ah dhaqaale dhan $3.5 milyan ku wareejiyay mashaariicda dhismaha Garoonka Garoowe iyo wadada Ceeldaahir iyo Ceerigaabo si loogu dhammeystiro shaqada dhismaha. Munaasabada lacag [...]
Hargeysa-(Puntland Mirror) Somaliland iyo Khaatumo ayaa maanta oo Sabti ah heshiis ku kala saxiixday gudaha magaalada Hargeysa. Qodobada lagu heshiiyay ayaa ahaa sidaan: Somaliland iyo Khaatumo in ay ku dedaalaan sidii afgarad buuxa loo wada [...]